Boqor Buurmadow oo dacwo laga gudbiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Boqor Buurmadow oo dacwo laga gudbiyay
Buurmadow, ayaa la filayaa inuu dhawaan la hado warbaahinta, isla-markaasna uu ralli-galin ka bixiyo, hadalka digashada ah eek u socday bulshada koofureed.
MUQDISHO, Soomaaliya – Maamulka goboka Banaadir ayaa sheegay in ay gudbiyeen dacwad lid ku ah Boqor Cismaan AW-Maxamuud Maxamed [Buurmadoow], kaas oo dhawan sheegay in koofurta Soomaaliya ay ka jirto labo dowlad, [Al-Shabaab iyo Dowladda Federaalka].
Sidoo kale, Maamulka Gobolka ayaa sheegay inuu ayidsanahay qabashada Banaanbax looga soo horjeedo hadalka Buurmadow ku taageeray Kooxda xiriirka la leh Alqaacida ee Al-Shabaab.
Buurmadow, wuxuu Al-Shabaab ku tilmaamay Dowlad, taas oo kaliya shaqsiyaad isaga ku qabiil ah ay xukumaan, wuxuu naxariis u rajeeyay Axmed Cabdi Godane [Abuu Subeyr] Amiirkii hore ee kooxda.
Hadalka ka soo yeeray Gobolka, ayaa la rumeysan yahay inuu salka ku hayo dano siyaasadeed, isla-markaasna looga aarsanayo Wasiirka Waxbarashada, Cabdullaahi Carab, oo Buurmadow, garab taagnaa xilligii uu oranayay hadalka la dhibsaday, kaas oo khillaf ganacsi kala dhexeeyo Cumar Finsh.
Sidoo kale, Boqor Cismaan, wuxuu ahaa shaqsigii ka danbeeyay in la isku keeno labadii garab ee Farmaajo u kala jabshay Siyaasiyiinta Soomaaliland, waxayna Madaxtooyada Soomaaliya u aragtaa inuu khatar ku yahay cododka ay Kooxda Farmaajo ka filayaan xubnaha Gobollada Waqooyi.
Maamulka Goboka Banaadir, wuxuu hore u diiday bannaan-baxyo nabadeed, oo dareenka shacabka ka yimid, waxaana hoggaanka amniga gobolka hore lagu eedeeyaa in ay kaliga ka shaqeeyaan danaha Farmaajo.
Siyaasiyiinta iyo dhaqanka ka soo jeeda Gobollaa Waqoyi, ayaa si joogto ah ugu gafa bulshada ku dhaqan koofurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Buurmadow, ayaa la filayaa inuu dhawaan la hado warbaahinta, isla-markaasna uu ralli-galin ka bixiyo, hadalka digashada ah ee ku socday bulshada koofureed.